"Ary efa notafinareo ny toetra vaovao, izay havaozina ho amin’ny fahalalana tsara araka ny endrik’izay nahary azy." Kol. 3:10.
Rehefa nivoaka avy teo am-pelatanan'ny Mpahary azy i Adama, dia nitondra ny fitoviana tamin'ny Mpamorona azy, tao amin'ny vatany, ny sainy, ary ny fanahiny (...)
Noho ny fahotana dia nanjavozavo, eny saika takona mihitsy aza izany fitoviana tamin'Andriamanitra izany. Nihanalemy ny herim- batan'ny olona, nihena ny fahafahany misaina, takona ny fahitany ara-panahy. Nanjary niharan'ny fahafatesana izy. Na izany aza anefa tsy nafoy tsy nisy fanantenana tsy akory ny taranak'olombelona. Fa tamin'ny fitiavana sy ny famindrampo tsy manam-petra no namolavolana ny drafi-panavotana, ka dia nahazo alalana ny fiainan'ny fizahan-toetra. Mba hamerenana indray ao amin'ny olombelona ny endrik'llay Mpanao azy, mba hitondrana azy ireo indray hiverina amin'ny fahatanterahana tahaka ny tamin'ny namoronana azy, mba hampandrosoana ny fitomboan'ny vatana, saina ary fanahy, ka mba ho tanteraka ny fikasan'Andriamanitra tamin'ny andron'ny famoronana dia izany no atao hoe asa goavan'ny fanavotana.
Na dia saika takon'ny fahotan'i Adama aza ilay endrik' Andriamanitra, amin'ny fahamendrehan'i Jesôsy sy ny heriny kosa dia azo havaozina indray izany. Azon'ny olona atao ny maneho ny endrik'Andriamanitra eo amin'ny toetrany; satria homen'i Jesôsy azy izany.
Zavatra tena nahafinaritra an'Andriamanitra tokoa ny namorona ny olona, ny nanamboatra ny saina. Ny voninahitr'Andriamanitra dia naseho tao amin'ny famoronana ny olona araka ny endrik'Andriamanitra sy ny fanavotana nataony. Fanahy iray dia misy vidiny mihoatra lavitra noho izao tontolo izao (...) Ny Tompo Jesôsy Kristy no namorona antsika, lzy koa no nanatanteraka ny fanavotana antsika, ka izay rehetra te hiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia hampitombo toetra izay mifanaraka amin'ny toetran'Andriamanitra.
Avy amin'ireo fahamarinana efa hita miharihary sy tsy azo ihodivirana intsony amin'izao andro farany izao, no isarihan'ny Tompo ny olona hiala amin'izao tontolo izao sy hanadiovany azy hanana fitoviana Aminy. Ny fireharehana sy ny fomba fiaina tsy mahasalama, ny fitiavana fisehosehoana, ny fitiavana fankasitrahana - ireny rehetra ireny dia tokony avela miaraka amin'izao tontolo izao raha tiantsika ny ho havaozina indray araka ny endriny, dia ny endrik'ilay Namorona antsika.
Amin'ny alalan'ny asan'ny fahasoavany izay manova dia tafaverina eo amin'ny mpianatra ny endrik'Andriamanitra [...].